Akụkụ nke ugwu mgbawa: njirimara, nkọwa na ọrụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Akụkụ nke ugwu mgbawa
Anyị maara na ugwu mgbawa nwere ọtụtụ akụkụ karịa ihe anyị ji anya gba ọtọ. Ndị a pụrụ ịhụ n’èzí bụ ugwu mgbawa ugwu ma ọ bụ cone dum ma anyị pụrụ ọbụna ịhụ lava na-amị na mgbawa. Otú ọ dị, e nwere ndị dị iche iche akụkụ nke ugwu mgbawa na anyị enweghị ike ịhụ nkenke bụ akụkụ bụ isi nke mpaghara ala a.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa akụkụ niile nke ugwu mgbawa na ọrụ dị na nke ọ bụla n’ime ha.
2 Akụkụ nke ugwu mgbawa
2.3 Ihe mgbawa mgbawa
2.4 Akụkụ nke ugwu mgbawa: gbawara agbawa
2.5 Chimney na dam
2.6 Akụkụ nke ugwu mgbawa: dome na ụlọ magma
Nke mbụ bụ ịmara ụfọdụ njirimara njirimara ugwu mgbawa. Ha bu ihe omumu banyere ala nke na-ezo akụkụ ndi ozo na nke emebere n’oge. Akụkụ ndị a dịgasị iche dabere na ọrụ ọkụ ọkụ. Onweghị ugwu mgbawa na-ele anya na ọdịdị ya na nke ọzọ. Otú ọ dị, ugwu mgbawa abụghị naanị ihe anyị na-ahụ n’èzí.
Volcanoes nwere njikọ chiri anya na nhazi nke ụwa anyị. Haswa nwere isi etiti na Ọ dị na steeti siri ike dị ka nrugharị nke 1220km radius. Uzo nke elu nke nucleus bu akuku siri ike nke ruru ihe ruru 3400km na okirikiri. N’ebe ahụ ka uwe mwụda si abịa, ebe a na-ahụ lava. Enwere ike ịkọwapụta akụkụ abụọ, uwe mwụda ala, nke sitere na 700km miri ruo 2885km, na nke elu, nke na-agbatị site na 700km ruo na eriri ahụ, nke nwere mkpụmkpụ nke 50km.
Ihe ndị a bụ akụkụ nke mebere usoro ugwu mgbawa:
Ọ bụ oghere nke dị n’elu ma ọ bụ ebe a na-achụpụ lava, ash na ihe niile pyroclastic. Mgbe anyị na-ekwu maka ihe pyroclastic anyị na-ekwu maka ya iberibe nile nke ugwu mgbawa ugwu, kristal nke mineral dị iche iche, wdg. Enwere ọtụtụ crat nke dị iche na nha na ọdịdị, ọ bụ ezie na nke kachasị bụ na ha dị okirikiri na mbara. E nwere ụfọdụ ugwu na-agbọpụ ọkụ nke nwere ihe karịrị otu ndagwurugwu.
Fọdụ akụkụ nke ugwu mgbawa na-akpata mgbawa ugwu gbawara agbawa. Ma ọ bụ na dabere na mgbawa ndị a anyị nwekwara ike ịhụ ụfọdụ nwere ike zuru oke nke nwere ike ịkwatu akụkụ nke usoro ya ma ọ bụ gbanwee ya.
Ọ bụ otu n’ime akụkụ nke ugwu ọkụ ọkụ nke na-adịkarị mgbagwoju anya na ndagwurugwu. Agbanyeghị, ọ bụ oke ịda mba nke na-apụta mgbe ugwu mgbawa tọhapụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile site na ime ụlọ magma ya na mgbawa. Caldera na - eme ka nsogbu ghara idi n'ime ugwu nke ndu na - enweghi nkwado ya. Enweghị usoro n'ime ugwu mgbawa na-eme ka ala daa n'ime. Caldera a buru ibu karịa ugwu ahụ. Buru n’uche na ọ bụghị ugwu mgbawa niile nwere ugwu.
Ọ bụ ngwakọta nke lava na-eme ka ọ sie ike ka ọ na-ajụ oyi. Otu akụkụ nke ugwu mgbawa ahụ bụ pyroclasts niile dị na mpụga ugwu mgbawa nke na-emepụta site na mgbawa ma ọ bụ ihe mgbawa na oge. Dabere na ọnụọgụ nke rashes ị nweworo na ndụ gị niile, cone nwere ike ịdị iche na ma ọkpụrụkpụ na nha. Kacha nkịtị mgbawa ugwu cones na-adị bụ ndị nke slag, spatter na ndị nke tuff.
Akụkụ nke ugwu mgbawa: gbawara agbawa
Ihe ndị a bụ mgbawa ndị na-eme na ebe a na-achụpụ magma. Ha bụ ọnyá ma ọ bụ mgbawa nwere ụdị elongated nke na-enye ikuku n'ime ime na nke ahụ na-eme ebe a na-achụpụ magma na gas dị n'ime ya n'elu. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na-eme ka a tọhapụ ya site na ọwa mmiri ma ọ bụ anwụrụ ọkụ na n'ọnọdụ ndị ọzọ ọ na-eme ya n'udo site na mgbawa na-agbatị n'ọtụtụ ụzọ ma kpuchie nnukwu ala.
Chimney na dam
Anwụrụ anwụrụ bụ ebe a na-esi aga a na-ejikọ ọnụ ụlọ magma na oghere. Ọ bụ ebe ugwu a na-agbọpụta ọkụ nọ na ya mee ka a chụpụ ya. Na-agbanyekwu, gas ndị a na-ewepụta n'oge mgbawa na-agafere mpaghara a. Otu n'ime akụkụ nke mgbawa ugwu mgbawa bụ nrụgide. N'iburu nrụgide na ọtụtụ ihe ndị na-ebili na mpio anwụrụ ahụ, anyị nwere ike ịhụ na nrụgide na-adọka nkume site na nrụgide ahụ ma chụpụkwa ya na anwụrụ ọkụ.
Banyere dike, bụ ọdịdị dị egwu ma ọ bụ nke magmatrị ndị nwere ọdịdị tube. Ha na-agabiga na okwute nke nkume dị nso wee sie ike mgbe ọnọdụ okpomọkụ ahụ dara. A na-emepụta mmiri mmiri ndị a mgbe magma bilitere na mgbaji ọhụrụ ma ọ bụ mepụta mgbawa iji soro ụzọ ya n'elu nkume. N’okporo ụzọ ọ na-agafe nkume sedimentary, metamorphic na plutonic.
Akụkụ nke ugwu mgbawa: dome na ụlọ magma
The dome bụ ihe ọ bụla karịa nchịkọta ma ọ bụ ná mkputamkpu ala a na-emepụta nke ukwuu viscous lava na-enweta a okirikiri udi. Lava a dị oke egwu na ọ nweghị ike imegharị ebe ọ bụ na esemokwu dị ike na ala. Mgbe obi jụrụ jụrụ, ọ na-agwụ ike ma mepụta ụlọ ndị a. Fọdụ nwere ike iru elu ma ọ bụ mgbatị dị iche iche ma ọ bụ jiri nwayọ too ọtụtụ afọ n'ihi nchịkọta nke lava. Ọ na-adịkarị n’ime ugwu na-agbọpụ ọkụ ma ọ gafere oke oghere ahụ. Anyị nwere ike ịchọta ha ugboro ugboro na stratovolcanoes.
N'ikpeazụ, otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ọkụ ọkụ bụ ụlọ magma. Ọ bụ ọrụ maka ịkwakọba magma nke sitere na ime ụwa. A na-ahụkarị ya na nnukwu omimi na Ọ bụ nkwụnye ego na-echekwa nkume a wụrụ awụ nke ejiri aha magm maraka. O sitere na uwe elu ụwa. Mgbe ugwu mgbawa malitere ịgba, magma na-esi na mpio anwụrụ ọkụ ma si na ndagwurugwu ahụ pụọ. A na-ebugharị ya site na nrụgide ma ozugbo a chụpụrụ ya, a na-akpọ ya ugwu mgbawa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere akụkụ nke ugwu ọkụ na ọrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Akụkụ nke ugwu mgbawa
Ndewo ebe ahụ. Ihe ederede a masịrị m nke ukwuu na ka ọ dị mfe ịgụ ya. Ọ dị mkpa ka agbakwunye ụbọchị mbipụta na ndezigharị ikpeazụ ka ụmụ akwụkwọ nwee ike idekọ ya nke ọma n'akwụkwọ akụkọ ha. Ọtụtụ ekele.
Zaghachi Luis Tauer
Ihe osise Hertzsprung-Russell